त्यहाँ कुनै पनि प्रदर्शन सिफारिसहरू र अमेजन उत्पाद शीर्षक अनुकूलन दिशानिर्देशहरू छन्?
Google द्वारा प्रयुक्त प्रमुख खोज एल्गोरिदम जस्तै, अमेजनमा उत्पादन को रैंकिंगले यसको बिक्रीमा सूचीबद्ध प्रत्येक वस्तुको लागि उत्पादन स्थिति निर्धारण गर्दछ। आधिकारिक अमेजन उत्पाद शीर्षक दिशानिर्देशहरूको अनुसार, प्रत्येक विक्रेताले उत्पाद विवरण पृष्ठको लागि दृश्यहरूको संख्यामा महत्त्वपूर्ण वृद्धि देख्न सक्दछ - केवल एउटा थप खोज शब्द थपेर। निस्सन्देह, यो खोज शब्द दिईएको साँच्चै राम्रो, प्रासंगिक र सम्भव एक हो। त्यो भीड बजारमा हरेक उत्पादन खोजी स्थिति निर्धारण गर्ने अन्य कारकहरू बीच, त्यहाँ उत्पाद मूल्य, उपलब्धता, विक्रेताको इतिहास आदि इत्यादि धेरै गुणहरू छन् र यो एक शीर्षक हो कि उत्पाद शीर्षक सधैंको लागि हो त्यहाँ हरेक पसल द्वारा खरीद गरेको पहिलो कुरा त्यहाँ खरीद। त्यसैले, तपाईको रेन्क्समा वृद्धि गर्न उत्तम अमेजन उत्पाद शीर्षक दिशानिर्देशहरू र यो भीड बजारमा वास्तवमा cutthroat-level प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा गर्ने? हेरौं।
अमेजन उत्पाद विवरण र शीर्षक अप्टिमाइजेसन दिशानिर्देश
टायर वन: सेट अप उत्पाद सूची दायाँ बाटो
आदर्श रूप मा, एक राम्रो उत्पादन सूची उत्पादनको सन्दर्भमा सबै समर्थित डेटा सही रूपमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ। र यो डाटा भनेको तपाईंको "आदर्श" ग्राहक हेर्न चाहनु हुन्छ र तपाईंसँग खरीद पूर्ण गर्नको लागि जान्न आवश्यक छ। अर्को शब्दमा तपाइँ सबैलाई आवश्यक छ कि तपाइँका सबै आगन्तुकहरू तपाईको भण्डारबाट के गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भनेर थाहा पाउनुहोस्।
यहाँ राम्रो प्रदर्शनकारी उत्पादन सूचीको मुख्य घटकहरू छन्:
उत्पादन शीर्षक शीर्षकको लागि अमेजनको सामान्यतया स्वीकृत शैलीसँग अद्वितीय, संक्षिप्त र अनुरूप हुनुपर्छ।
बुलेटहरूको सूचीलाई बिक्रीको वस्तुको बारेमा मात्र महत्त्वपूर्ण डेटा समार्नु, शीर्ष महत्वको पाँच अंक भन्दा बढी समावेश गर्न सिफारिस गरिएको छ।
स्वच्छ उत्पादन विवरण केवल मुख्य सुविधाहरू, फाइदाहरू, र उत्पादन विवरणहरू असर गर्दै।
स्पष्ट उत्पादन छवि को लागी तपाईंसँग प्राप्त गर्न को लागी वास्तव मा के देखाउने उद्देश्य छ।
टाइयर दो: आधारभूत अमेज़ॅन उत्पाद शीर्षक दिशानिर्देशहरू विचार गर्नुहोस्
अरू केही गर्न अघि, ध्यान राख्नुहोस् कि अमेजनसम्म जुलाई 2015 सम्म। यही कारणले गर्दा निम्न व्यावहारिक शीर्षक अनुकूलन युक्तिहरू मार्फत चलिरहेको बेला यो थ्रेडहोल्ड तल प्रत्येक उत्पादन शीर्षक राख्न निश्चित हुन्छ। अन्यथा, ग्राहकहरूको शेरको अंशले अमेजनको उत्पाद खोजीमा तपाईलाई खोज्न लगभग शून्य संभावनाहरु पाउनेछ। त्यसोभए, यहाँ के राम्रो उत्पादन शीर्षकहरू बिक्री गर्न सकिन्छ:
सुरुवात प्रत्येक शब्दलाई पूंजीकृत हुनुपर्छ।
सबै माप शब्दहरू (जस्तै इन्च, औंस, पाउन्ड, आदि) लाई हिज्जे भनिन्छ।
त्यहि तरिकामा, सबै संख्याहरू अंकको रूपमा आउन पर्छ।
एम्परपस (ए.ए Source - cornice per camino elettrico in offerta black frid. "र") को संकेत निषिद्ध छन्।
रंग / साइजलाई अनुमति छैन (जबसम्म तिनीहरू साँच्चै सम्बन्धित विवरणहरू छैनन्)।
कुनै बिक्रेता डेटा, ढुवानी, प्रोमोशनल, वा कुनै सुझावकारी जानकारी निर्दिष्ट गर्नुहोला।
विशिष्ट प्रतीकहरू जस्तै "$," "!" "र"? "लाई पनि अनुमति छैन।